I-china Abakhiqizi bekhanda basebenza ngemisebenzi emithathu | I-Chengpai
Inombolo yemodeli I-CP-3T-RQ01
Ikhanda leshawa lesandla Insimbi engagqwali engu-304, i-silicon
Ipayipi lokugeza eliphathwa ngesandla Insimbi engagqwali engu-304, ipulasitiki
Isisindo se-Net (kgs) 7.90
Isisindo Esiphelele (kgs) 8.50
Izibani ze-LED zifakiwe Cha
1.Ultra mncane, 2mm ubukhulu.
3.Easy ahlanzekile. Imibhobho yamaslicon ingasulwa ngokushesha.
Amaphethini we-4.THREE wokufafaza: imvula ephezulu, impophoma, i-handheld shower.
Lesi setha esisheshayo esingunxande ngaphezulu yindawo yokugezela ehlukahlukene futhi ibalulekile ezindlini zangasese zanamuhla. Iletha ukugeleza okunamandla ngephethini yesifutho, impophoma, imvula ephezulu kanye neshawa ebanjwe ngesandla. Yengeza ubukhulu obusha ekugezeni kwakho, okufakwe odongeni lweshawa lakho, amanzi aqabulayo asatshalaliswa emzimbeni wakho wonke nge-spray yayo ebanzi.
Ikhanda leshawa lilinganisa u-560 x 230 mm, okuqinisekisa ukuzitika kweshawa ngezinga elikhulu. Ngemigqa yayo emincane kanye ne-christ evele ipholishiwe, ibuye yengeze ukuthinta kwesimanje endlini yangasese.
Ukwakhiwa kwesihlambi semvula kunensimbi engagqwali esindayo engama-304, okuhlala isikhathi eside ngokumelana nokugqwala. Umphetho we-chrome ophucuziwe ebusweni wenza ikhanda leshawa lihle futhi lifane nomdlalo wokuhlobisa.
Ukuze kwenziwe ukuhlanza kube lula, imibhobho yamakhemikhali eguquguqukayo ethambile itholakala ku-aerator yeshawa yangaphezulu neshawa lesandla. I-silicone esezingeni eliphakeme, emelana nezinyembezi kulula ukuyihlikihla usebenzisa iminwe yakho. I-Limescale nokungcola kuyanyamalala njengokungathi ngomlingo, futhi uyazuza ekuhlangenwe nakho okunethezeka kwe-jet spray njalo. Isifutho esihle seshawa lapho ugeza kanye nokugeleza kwamanzi lapho ugeza izandla zakho kwenza le mikhiqizo ibe yinjabulo yokusebenzisa.
I-valve yokugeza enezibambo ezimbili yenziwe ngensimbi engagqwali engu-304, eqinile futhi eqinile, ayisoze yavuza. Inkinobho yokulawula ukusebenza okulula, okwenza ishawa ithambe futhi ibe ngokunethezeka futhi ishiye umuzwa omnandi esikhunjeni sakho. I-tonic yomphefumulo ku-spa yakho yangasese.
Lesi setha seshawa sifaka ishawa yaphezulu, ishawa yokupholisa ngesandla ne-valve yokulawula. Kubekwe odongeni futhi kwafakwa kalula njengokwakhiwa kwayo okulula.
Langaphambilini Iphaneli yokugeza ephucuziwe ifakwe udonga lomsebenzi omane
Olandelayo: Ikhanda leshawa lesikwele elingenalutho elingenalutho
Efihliwe LED isikwele shawa ikhanda
Engela Kwesokudla nge lokushisa isibonisi s iphucuziwe ...